လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: လကမ္ဘာခရီးစဉ် နှစ် ၄၀ ပြည့်
Posted by Law Shay at 3:19 AM
ကိုလောရှည်ရေ…. ခင်ဗျားတို့၊ ကျနော်တို့ကသာ ဂုဏ်ပြုနေကြတာခင်ဗျ။ မယုံတဲ့လူတချို့ကလည်း Moon Hoax ဆိုပြီး လပေါ်ကို လူရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အမေရိကန်တွေရဲ့ လိမ်ဆင်ကြီးလို့ စွတ်စွဲကြရှာလေတယ်။ သူတို့စွတ်စွဲတဲ့အချက်တွေကို ချက်နဲ့လက်နဲ့ ချေပတော့လည်း မှားပါတယ် ၀န်မခံကြလိုဘူး။
လပေါ်လူဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အရှင်းဆုံးသာဓက ကတော့…. အဲဒီ အပိုလို ပရိုဂရမ်ဟာ ဆိုဗီယက်ရုရှားနဲ့ အမေရိကန်တို့ အာကာသနည်းပညာ ပြိုင်ဆိုင်ကြရင်း သမ္မတ ကနေဒီက အစပြုခဲ့တာ။ အမေရိကန်တွေ လပေါ်ကို လူလွှတ်တဲ့အချိန်မှာ ရုရှားကလည်း သူတို့ ရေဒါတွေနဲ့ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေမှာ အမှန်ပါဘဲ။ အပိုလို ၁၁ က လွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်းတွေကို အမေရိကန်တွေနည်းတူ သူတို့ ရေဒါတွေကလည်း ဖမ်းမိနေမှာပဲ။ အမေရိကန်တွေ လိမ်တယ်ဆိုရင် ပြိုင်ဖက် ရုရှားကြီးက သဘောထားကြီးစွာ ဘယ်ငြိမ်ခံနေပါ့မလဲဗျာ။ ထပြီး သောက်ရှက်ခွဲလိုက်တော့မှာပေါ့။
နောက်ဆုံးတော့လည်း…. အဲသည် မယုံပါဘူးပြောတဲ့လူတွေကို သနားပဲ သနားမိတော့တယ်။ သြော်…လူတွေ…လူတွေ..။